January 2009 - Knowledge is Free
ကွန်ပျူတာဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ကွန်ပျူတာအမေးအဖြေကဏ္ဍပါ အမေးအဖြေများကို ပြန်လည် တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကွန်ပျူတာကို နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသူများ၊ ကွန်ပျူတာကို ရံဖန်ရံခါသုံးစွဲသူများ၊ ကွန်ပျူတာကို သုံးစွဲရန် အစီအစဉ် ရှိနေသူများအတွက် ကွန်ပျူတာသုံးစွဲနေရင်း တွေ့ကြုံလာရနိုင်သည့် အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို ဖော်ပြထားသည်။
-ကွန်ပျူတာ စာစီစာရိုက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စာရင်းဇယား ရေးဆွဲခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း အပါအ၀င် ၀င်းဒိုးစ်အသုံးပြုသည်အထိ အခန်းကဏ္ဍပေါင်း ၁၅ ခု၊ မေးခွန်းပေါင်း ၅၀၀ ခန့် ကို ဖြေဆိုဖော်ပြထားသည်။
-အမေးအဖြေတစ်ပုဒ်ချင်းတိုင်းသည် ကွန်ပျူတာ သင်ခန်းစာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ မိမိကွန်ပျူတာတွင် ပြဿနာဖြစ်ပေါ်မှ အဖြေရှာဖွေဖတ်နိုင်သကဲ့သို့ တစ်အုပ်လုံး အစအဆုံး လေ့လာဖတ်ရှုလျှင်လည်း အကျိုးရှိ သည့် အမေးအဖြေများ ဖြစ်သည်။
- ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက် ပြဿနာများကို အဖြေရှာဖွေပေးထားသည့်အတွက် အားလုံးကို လေ့လာပြီးလျှင် မိမိကွန်ပျူတာတစ်ခုဖြစ်တိုင်း ကွန်ပျူတာပြင်ဆိုင်သို့ ပို့စရာမလိုဘဲ မိမိဘာသာ ဖြေရှင်းနိုင်သည်အထိ နားလည် တတ်ကျွမ်းလာမည်ဖြစ်သည်။
-ကွန်ပျူတာအမေးအဖြေ တစ်ပုဒ်ချင်းတိုင်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော စကားပြေဖြင့် ဖော်ပြထားပြီး လိုအပ်သည့် နေရာတိုင်းတွင် သရုပ်ဖော်ပုံများ၊ အဆင့်အလိုက်ရှင်းလင်းချက်များဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။
File Type=PDF, Size=8.04 MB
Posted by kmo at 5:05 PM No comments:
MyMyanmar Unicode 2009
What happen when you becomeabillionare? You may want to beasuperhero. What happen when Myanmar Unicode is perfect solution, you may want MyWindows. Entire Windows XP in Myanmar Language.
Download File Type: Rar, Size=25 MB
More details: http://www.mymyanmar.net
Posted by kmo at 8:04 PM No comments:
Domain name တစ်ခုဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ host computer ဒါမှမဟုတ် service ရှိရာ ရှာပေးပြီး အတည် ပြုပေးပါတယ်။ domain name ဟာ မကြာခဏဆိုသလို business, organization ဒါမှမဟုတ် service တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတတ်ပြီး company အမည်တစ်ခုလိုပဲ မှတ်ပုံတင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ domain တွေကို sub domain ဆိုပြီး ထပ်ခွဲပါသေးတယ်။ ပုံစံကတော့ domain ပုံစံပါပဲ။ ထပ်ခွဲတာက တိုင်းပြည်တွေရဲ့ code အမှတ် အသားပါပဲ။ အဲဒါကို sophie@thehub.com.aw မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ sub domain ဆိုတာက thehub ပါပဲ။ thehbub ကို Internet Service Provider လို့လည်း သိထားကြပါတယ်။ သူရဲ့ domain ပုံစံမှာပါတဲ့ com ဆိုတာ က company တစ်ခု (သို့) commercial site ကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ code ကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဥပမာ au ဆိုရင် သြစတြေးလျ (Australia) ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ သီးခြား code တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ code တွေကို အမြဲသုံးလေ့မရှိပါဘူး။ အဲဒီ code တွေကတော့-
domain name ပုံစံများတွင် အောက်ပါတို့လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
ac Academic (UK)
com Company or Commercial organization
co Company or commercial organization (UK, NZ)
net Internet gateway or administrative host
အကျယ်သိလိုပါက http://www.internic.net/faq.html ကို ဆက်သွယ်ကြည့်ပါ။
co.cc သည် free အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သော domain တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအား URL (Uniform Resource Locator) တစ်ခုအနေဖြင့်သာမကပဲ DNS Records, A, MX, နဲ့ CNAME records များအတွက်လည်း အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ Blog တွေရဲ့လိပ်စာအမည်တွေကို co.cc အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်နိုင်ပါတယ်။ "name.blogspot.com" ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့သုံးရတာကိုက အရမ်းရိုးလွန်းနေပါပြီတဲ့ (ဒါကတော့ သူ့အပြောပေါ့)။ ဒါကြောင့် blog ရဲ့ နာမည်ကို blogspot.com အစား co.cc ဆိုတဲ့ domain လေးနဲ့ ပြောင်းသုံးဖို့ ကြိုးစားကြည့်လိုက်ရအောင်။ ပထမဦးစွာ-
(1) သင့် browser ရဲ့ address bar မှာ co.cc ရဲ့ site ကို ရိုက်ထည့်ပြီးသွားလိုက်ပါ။
(2) ထို့နောက် သင်အသုံးပြုလိုသော domain အား register လုပ်လိုက်ပါ။
(3) အကယ်၍ သင်ပေးလိုက်သော site နာမည်သည် အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်က အသုံးပြုထားသည့် site အမည်နှင့်သွား၍ တိုက်ဆိုင်တတ်ပါသည်။ ထိုအခါ အခြားသင့်တော်ရာ domain အမည်တစ်ခုခုဖြင့် ပြောင်းလဲပြီး ထပ်မံ Check availability ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။
(4) ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးသွားသောအခါမှာ သင့် domain ကို ထပ်မံပြီး setup လုပ်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် Setup-->Manage domain ကို သွားလိုက်ပါ။
(5) ထို့နောက် Zone Records ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
(6) Host Column အကွက်ထဲတွင် သင်ရွေးချယ်ခဲ့သော domain ကို ထည့်ပါ။
( ဥပမာ- www.yourdomainname.co.cc )
(7) Type အတွက် CNAME ကို ရွေးချယ်ပါ။
(8) Value box အတွင်းမှာတော့ "ghs.google.com" လို့ ဖြည့်ပေးပါ။
(9) ထို့နောက် Setup ကို Click နှိပ်လိုက်ပါ။
ကျန်ရှိတဲ့ အဆင့်တွေကတော့ blogspot မှာ ပြင်ဆင်ရမယ့် အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်-
ရှေးဦးစွာ Blogger.com ရဲ့ blogspot မှာ Log In လုပ်ပြီး-
(1) "Setting --->Publishing" ကို ရွေးချယ်ပါ။
(2) ထို့နောက် Switch to: Custom Domain ကို ရွေးပါ။
(3) "Already ownadomain? Switch to advanced settings" မှာ click နှိပ်ပါ။
(4) ထို့နောက် "Your Domain" ဆိုတဲ့အကွက်ထဲမှာ သင့်ရဲ့ domain name လေးကို ဖြည့်လိုက်ပါမယ်။
(5) သင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံး ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Save Setting ကိုထပ်မံနှိပ်လိုက်ပါ။ 1-48 နာရီ အတွင်းမှာ သင့် co.cc နဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ domain က စတင်အလုပ်လုပ်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက် guide book (မောင်ထူးချွန်)
Posted by kmo at 7:32 PM No comments:
How to Add Google Webmaster Tools to Your Blogger Blog
သင့် sites ဆီကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြည့်ရှု့ကြသူများအပေါ်မှာ သင့်လုပ်ဆောင်မှု project ကို အသိအမှတ် ပြုနိုင်ရေးသည်သာ အဓိကလိုရင်းပန်းတိုင် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဈေးကွက်ကို ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ websites များရဲ့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ Site အားလုံးအတွက် အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး Tools တစ်ခုမှာ Google Webmaster Tools တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ပုံမှာ လွယ်ကူပြီး Blogger အတွက်သာမက Website များအတွက်ပါ အသုံးချနိုင်ပါသေးတယ်။ Tracking လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်အရ သင့် site အတွင်းသို့ Google Tools လေးကို ပေါင်းထည့်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှလည်း Google မှာ ရှာဖွေတဲ့အခါမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ရေးတင်ထားသော အချို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို တိုက်ရိုက်အသေးစိပ် မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ မစတင်မှီ သင့် Blogger Template (သို့) Website ကို Backup လုပ်ထားပါ။ ထို့နောက်
ဟူ၍ သွားပါ။ အကယ်၍ Google account အတွင်း သင် sign in လုပ်ထားပါက ပုံတွင် ပြထားတဲ့အတိုင်း Continue ကိုသာ click နှိပ်လိုက်ပါ။
ယခုဆိုရင် သင့် site အကြောင်းကို Google သို့ ပြောရန်အတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ သင့် blog ရဲ့ URL ကို အောက်တွင်ရှိသော ပုံစံအတွင်း ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် Next ကို Click သာ နှိပ်လိုက်ပါ။
ထပ်မံပြီး ကျွန်ုပ်တို့ site ကို Verify လုပ်ရန်အတွက် "Verify Your Site" အပေါ်မှာ Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
"Choose Verification Method" ကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် "AddaMeta tag." ပေါ်မှာ click နှိပ်ပါ။
ထိုအခါ သင့် blog အတွင်းသို့ ပြောင်းလဲထည့်သွင်းရန်လိုအပ်တဲ့ Meta tag ကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အောက်ဘက် နမူနာတွင် ကြည့်ပါ။
(1) ထို့နောက် blogger.com ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
(2) Sign-in ပြုလုပ်ပြီး blogs Control panel သို့ သွားပါ။
(3) ထို့နောက် Template ပေါ်တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
(4) ထပ်မံပြီး "Edit HTML" ပေါ်တွင် ပုံတွင်ပြထားသကဲ့သို့ Click နှိပ်လိုက်ပါ။
Verification code ကို Blogger အတွင်းရှိ "Edit HTML" အပိုင်းတွင် ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်-
(1) သင့် Template အတွင်း head ဟူသော tag ကို ပုံတွင်ပြထားသကဲ့သို့ ရှာဖွေလိုက်ပါ။
(2) ထို့နောက် သင် Webmaster Tools အတွင်းမှ ကူးယူလာသော code ကို head tag ရဲ့ အောက်မှာ ထည့်ပါ။
(3) စာမျက်နှာအောက်ဆုံးသို့ Buttom ကို Scroll လုပ်ပြီးနောက် "Save Template" ပေါ်တွင် Click နှိပ်ပါ။
Verification code ကို သေချာစွာထည့်ထားပြီးနောက် Save လုပ်ပြီးသော် Verification Process ပြည့်စုံ သွားပါပြီ။ ပြီးသော် Webmaster Tools window ဆီသို့ ပြန်သွားပြီး Verify ပေါ်တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
ယခုဆိုရင် သင့် site မှာ Google Webmaster Tools ကို အသုံးပြုထားနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
Ref: post of xnyash
Posted by kmo at 11:12 PM No comments:
How to Add Google Webmaster Tools to Your Blogger ...